Seenaa Gooticha Jaal Laggasaa Wagii (1960-2008) – Oromedia
Home » Seenaa » Seenaa Gooticha Jaal Laggasaa Wagii (1960-2008)
Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate.Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa tokkoffaa Bakkamee jedhamutti kutaa 1-4 barate. Barmoota isaa kutaa 5-8 ammoo mana barumsaa Hincinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10-11 magaluuma Finfinneeti barate.
Jaal Laggasaa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa ummata isaaf qaba. Akkasumas hacuuccaan ummata isaa irra gahu boqonnaa waan isa dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun QBO hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaa fi leenjjii waraanaa marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta’e.
Dammaqiinsaa fi hubaannoo Jaal Lagaasa Wagii qabu irratti hundaa’uun dhaaba keessaatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuuguu jedhamuutti barate. Akka baratee baheen dirqama dabballummaan zoonii Begitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa gahummaan osoo bahaa jiruu mootummaan Dargii kufe. Dhaabni dandeetii fi gahummaa isaa ilaaluu dhaan ona Qaaqeetti dirqama bulchiinsaatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo ABO ummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa ta’uusaatti miseensaa fi ummata biratti jaalala fi kabaja guddaa nama horate dha.
Jaal Lagasaa Wagii bishina qabu irraa, tooftaa fi mala qabu irraa akkasumas gootuummaa qabu irraa ummaata Oromoo hunda birraatti kan baay’ee jaallatamuu fi kabajamu dha. Akkasumaas, jaal Laggasaa Wagii diina biratti kan bay’ee sodaatamuu, gootummaa fi abbaa tooftaa fi malaa tahuun isaa diinootni keenya utuu hin jaallatin kan ragaa bahanii dha.
Mammaksi Oromoo “Namni gaafuma dhalate du’e” jedha. Gootni maraa tokko duwwaa du’a, dabeessii garuu lamaa fi sanaa oli du’a. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhamee bahu, akkasumas lubbuun qabsoo saba ofii fi kabaja ummata ofiif jedhamee kafalamu kan seenaan barabraan yaadatamu dha. Wareegamni lubbuu qaali taate, mirga sabaa fi biyya ofiif jedhamee kafalaamu wareegama akka gaaraa ulfatuu, kan seenaan yaadataa hafuu dha. Mirgi saba ofii akka kabajamuu fi abbaan biyyummaa ummata Oromoo akka mirkanaahu taasisuuf waan hunda caalaa gootummaan murteessa dha. Sadarkaan gootummaa inni dhumaas wareegama lubbuu ofii mirga sabaa fi biyya ofiitif jedhamee kaffalamuu dha.
Jaal Laggasaanis, waregama qaalii taate kana kennuun kabajamuu mirga saba isaatii fi abba biyyuummaa Oromoof gootaa of kenne waan taheef seenaan isaa hogayyuu barabaraan kan yaadatamuu taha. J/Lagasaan dirqama sabummaa isaa kana beela’e, dheebodhe, dadhabe, gaara bahuu, daggala cabsuu fi hifadhe osoo hin jenne baddaa fi gammoojjii keessatti rooba, qorraa fi aduu osoo hin jenne rakkinoota qabsoo hadhaawoo hundaa kana danda’uun waggootii kana hunda kayyoo kabajamaa kanaaf qooda ol aanaa kennaa turuun ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa akka qabaatu isa taasisa. Qabsaawota bilisummaaf fakkii guddaa tahee jira.
Jecha Maammo Mazammir “ Qabsaawaan Kufus Qabsoon Itti Fufa “dhigni ilmaan Oromo akka dhangalaetti hin hafuu .dhaloota guma ilmaan oromoo deebisu nu haa godhu!!
Previous: ኢሬቻን መረዳት
Next: Qabsaa’ota Oromoo sirna Woyyaaneen ukkaamfaman